မြန်မာ့မြေပိုင်နက်တွေကို No Man’s Land အဖြစ် စတင်ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲမှုကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း မြန်မာ့မြေပိုင်နက်တွေကို No Man’s Land အဖြစ် စတင်ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲမှုကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်
epa06470875 An armed policeman stands guard near the fence of the Taungpyo Bangladesh-Myanmar border gate where the repatriation process planned to take place in Maungdaw district, Rakhine State of western Myanmar, 24 January 2017. Efforts to repatriate the nearly 700,000 ethnic Rohingya Muslim refugees that fled from Rakhine State into Bangladesh have been delayed due to continued instability in Rakhine State. EPA-EFE/LYNN BO BO
မြန်မာ့မြေပိုင်နက်တွေကို No Man’s Land အဖြစ် စတင်ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲမှုကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအကြားက မြန်မာ့မြေပိုင်နက်တွေကို No Man’s Land အဖြစ် စတင်ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲမှုတွေကို နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၁ ပါတီက ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလလ ၂၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၁ ပါတီ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေကို ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဌေးက Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာက တဆင့် ပြောကြားလိုက်တာပါ။
ဒီလိုပြောကြားရာမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအကြားမှာ No Man’s Land လို့ သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်နိုင်တဲ့နယ်မြေ လုံးဝမရှိဘဲ မြန်မာ့ပိုင်နက် နယ်မြေတွေကို No Man’s Land အဖြစ် စတင် ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲမှုတွေနဲ့ သတ်မှတ်ဖို့ ကြံစည်အားထုတ်မှုတွေကို ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်တယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
မွနျမာ့မွပေိုငျနကျတှကေို No Man’s Land အဖွဈ စတငျချေါဝျေါ သုံးစှဲမှုကို ပွငျးထနျစှာ ကနျ့ကှကျ
မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံအကွားက မွနျမာ့မွပေိုငျနကျတှကေို No Man’s Land အဖွဈ စတငျချေါဝျေါ သုံးစှဲမှုတှကေို နိုငျငံရေးပါတီ ၂၁ ပါတီက ပွငျးထနျစှာ ဆနျ့ကငျြ ကနျ့ကှကျကွောငျး ပွောကွားလိုကျပါတယျ။
ဖဖေျောဝါရီလလ ၂၅ ရကျနကေ့ ရနျကုနျမွို့မှာပွုလုပျတဲ့ နိုငျငံရေးပါတီ ၂၁ ပါတီ တှဆေုံ့ပှဲမှာ ဆှေးနှေးခဲ့တဲ့ ဆှေးနှေးခကျြတှကေို ကွံ့ခိုငျရေးပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးသနျးဌေးက Facebook လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာက တဆငျ့ ပွောကွားလိုကျတာပါ။
ဒီလိုပွောကွားရာမှာတော့ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံအကွားမှာ No Man’s Land လို့ သတျမှတျချေါဝျေါနိုငျတဲ့နယျမွေ လုံးဝမရှိဘဲ မွနျမာ့ပိုငျနကျ နယျမွတှေကေို No Man’s Land အဖွဈ စတငျ ချေါဝျေါ သုံးစှဲမှုတှနေဲ့ သတျမှတျဖို့ ကွံစညျအားထုတျမှုတှကေို ပွငျးထနျစှာ ကနျ့ကှကျတယျလို့လညျး ဖျောပွထားပါတယျ။
Previous article၀ိနည်းနဲ့မညီတဲ့ သံဃာတွေကို အရေးယူနိုင်ဖို့ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော် ညီညွတ်ဖို့လို
Next articleNLD အစိုးရ အခွန်ကောက်ရာမှာ ပြည်သူတွေ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့လို